भिडियो स्टोरीः यसरी खोलिन्छ हृदयघात भएका मानिसको मुटुको नसा - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ भिडियाे ∕ भिडियो स्टोरीः यसरी खोलिन्छ हृदयघात भएका मानिसको मुटुको नसा
हेल्थ आवाज मंगलबार, २०७७ असोज २० गते, १६:४२ मा प्रकाशित
काठमाडौं—पछिल्लो समय नसर्ने रोगको प्रकोप बढ्दैं गएको छ । त्यसमा पनि मुटु सम्बन्धी रोगको प्रकोप दिनदिनै बढ्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाउँछ । हृदयघात भएर गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा उपचार गर्न आउने बिरामीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको केन्द्रका निर्देशक डा. चण्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा हृदयघात भएर आकस्मिक रुपमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या मासिक ३० जना रहेको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर, यस वर्ष सो संख्या बढेर मासिक ३५ जना पुगेको निर्देशक डा. अधिकारीको भनाइ छ ।
कोभिड—१९ महामारी आएयता केही समय आकस्मिक सेवामात्र संचालन गरेको अस्पतालले अहिले ओपिडी र योजनाअनुसार गरिने शल्यक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । कोभिड—१९ पछि क्याथल्याव प्रोसिड्युरमा १ सय ७६ जनामा प्राइमरी एन्जिओप्लाष्टी गरिएको छ । ९९ जनामा पेसमेकर राखिएको छ भने ५ सय ८७ जनामा कोरोनरी एन्जियोग्राफ्री र २ सय ५३ जनामा एन्जिओप्लास्टी गरिएको केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, ६ महिनाको अवधिमा १ सय ८६ जनाको ओपन हर्ट शल्यक्रिया सम्पन्न भएको छ ।
मुटु शल्य चिकित्सक समेत रहेका निर्देशक डा. अधिकारी पछिल्लो समय मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिर्वतनले मुटु सम्बन्धी रोग बढ्दै गएको बताउँछन् । चुरोट, रक्सी सेवन गर्ने, बोसोयुक्त खानेकुरा बढी सेवन गर्ने र निस्क्रिय जीवनशैली बिताउनेमा बढी मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने उनको भनाइ छ । ‘जीवनशैलीलाई सक्रिय बनाउने, उच्च रक्तचाप भएका र मधुमेहका बिरामीले समय—समयमा चिकित्सकसँग सल्लाह लिने र मुटुको जाँच गराउनुपर्छ,’ उनी सुझाव दिन्छन् ।
हेल्थ आवाजले बढ्दो हृदयघात र हृदयघात भइसकेपछि कसरी बन्द भएका मुटुका नसालाई खोलिन्छ भन्ने विषयमा भिडियो स्टोरी तयार पारेको छ । यो भिडियो स्टोरीमा एन्जोग्राफीमार्फत मुटुको समस्या पत्ता लगाउने र बन्द नसा खोल्न गरिएको एन्जियोग्राफी समेटिएको छ ।